Paleta miloko tonga lafatra ho an'ny asa famoronana rehetra | Famoronana an-tserasera
Angela Wright dia nanova ny teôria loko amin'ny alàlan'ny famantarana ny rohy misy eo amin'ny loko sy ny fanaon'ny olombelona. Hitan'izy ireo fa ny loko rehetra dia azo sokajiana ho vondrona tonona efatra. Avy eo izy no namolavola ny rafitra Misy vokany ny loko izay mamaritra ny rohy misy eo amin'ny loko miloko efatra sy karazana toetra efatra. Raha ampiasaina tsara izy dia afaka mampiasa ny Misy vokany ny loko hifehezana ny hafatra momba ny loko misy lokoo.
1 Ahoana ny fiasan'ny psikolojia loko
2 Vondrona loko 1
3 Vondrona miloko faharoa
5 Vondron'olona 4
Ahoana ny fiasan'ny psikolojia loko
Mazava ny loko, mandeha mankany aminay amin'ny onja avy amin'ny masoandro, amin'ny tsanganana elektromagnetika mitovy amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra, onjam-peo, taratra X, sns. Ny hazavana ihany no ampahany amin'ilay spectrum hitantsika, izay angamba manazava ny antony itondrantsika azy tsy matotra kokoa noho ny herin'ny taratra hafa. Noporofoin'i Isaac Newton fa mandeha amin'ny onja ny hazavana, rehefa namirapiratra tamina prisma telozoro ny hazavana fotsy, ary rehefa namboarina tamin'ny zoro samy hafa ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny hazavana dia afaka nampiseho izy fa ny lokon'ny avana (ny spectrum) no singa ampahan'ny hazavana.
Rehefa mamely zavatra miloko ny hazavana dia ny halavany ihany no hoentin'ny zavatra ny endrika onja izay mifanitsy tanteraka amin'ny rafitry ny ataonao ary hitaratra ny ambiny, izay no hitantsika. Ny lokony dia angovo ary ny fiatraikany ara-batana amintsika dia voaporofo hatrany hatrany amina fanandramana, indrindra rehefa nangatahina ireo jamba hamantatra loko amin'ny rantsan-tànany ary afaka nanao izany mora foana ny rehetra.
Ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny halavany sy ny tanjaky ny vatana no mahery.
Ny singa fototra Angela Wright dia nahafantatra rehefa nandinika ny psikolojia momba ny loko ilay izy, mitovy, tsy misy loko diso; Ny volon-doko no mitarika ny valiny; Mety hanana lanitra volondavenona aho amin'ny andro fahavaratra, fa ny fihetsikay ho an'io volondavenona io miaraka amin'ny loko mahafinaritra amin'ny sehatry ny fahavaratra tsy hitovy amin'ny fitambaran'ny lanitra volondavenona miaraka amin'ny sehatra fotsy misy lanezy.
Vondrona loko 1
Ny loko vondrona 1 dia maivana, marefo ary mafana, ary misy mavo, fa tsy mainty. Ohatra amin'izany ny crème malefaka, turquoise ary kobalta. «Velona izy ireo, mangatsiaka, madio, madio ary tanora; momba ny fiandohana vaovao, "hoy i Wright.
Ireo toetran'ireo loko ireo dia taratry ny "antony manosika ivelany sy fahatanorana mandrakizay". Mazava amin'ny tongony, tia mandihy ireo olona ireo ary marani-tsaina izy ireo, saingy tsy tian'izy ireo ho tototry ny adihevitra akademika.
Vondrona miloko faharoa
Ny loko vondrona 2 dia milay (misy manga), midrange (misy volondavenona ny ankamaroany) ary marefo, nefa tsy voatery ho maivana, ohatra, ny voaroy, Maroon, na maitso hendry. Ny endri-javatra dia misy ny hakanton'ny ambany sy ny fotoana tsy voafetra.
"Milamina, milamina ary mifangaro ny toetra amam-panahy," hoy i Wright. “Misy antony manosika azy ireo ao anatiny, saingy mora tohina amin'ny zavatra tsapan'ny hafa izy ireo. Tsy te ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra izy ireo, fa izy ireo kosa no ho hery aorian'ny fandefasana.
Ny loko vondrona 3 dia mafana kokoa noho ny vondrona 1 (misy alokaloka mavo mavo kokoa), mahery sy mirehitra, ary misy mainty. Ohatra amin'izany ny maitso oliva, volomboasary may ary voankazo.
Sariaka, nentim-paharazana ary azo ianteherana, ireo alokaloka ireo dia malaza amin'ny marika sy miasa amin'ireo orinasa efa niorina tsara. Na izany aza, azon'izy ireo atao ny mampita toetra tsy refesi-mandidy na miseho lany andro raha tsy ampiasaina amin'ny fomba diso.
Ny loko vondrona 4 dia misy manga. Madio sy mazava be izy ireo, maizina be na mahery vaika. Misy mainty, fotsy, magenta, voasarimakirana ary indigo, ny toetoetran'ity vondrona ity dia misy ny fahombiazana, fahaizana sy faran'izay tsara, saingy diso fampiasa, ny loko dia azo jerena ho tsy dia tsara tarehy, be fitaovana ary lafo.
Amin'ny fampiharana, ny psikolojia momba ny loko dia miasa amin'ny ambaratonga roa: ny ambaratonga voalohany dia ny toetra ara-psikolojika fototry ny loko fototra iraika ambin'ny folo, izay iraisan'ny rehetra, tsy ijerena izay loko, loko na loko manokana ampiasainao. Ny tsirairay amin'izy ireo dia misy vokany tsara na ratsy ara-tsaina ary iza amin'ireo vokarina ireo no miankina amin'ny karazana toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Paleta miloko tonga lafatra ho an'ny asa rehetra
Ny maha-zava-dehibe ny sary famantarana amin'ny famolavolana pejy web